Ntụ ntụ bụ netwọkụ mmekọrịta ohuru maka ihe nkiri vidio | Gam akporosis
Bulite ma kesaa obere vidiyo nke egwuregwu kachasị amasị gị na ntụ ntụ, netwọkụ mmekọrịta ọhụụ
Powder rutere na ọchịchọ ịghọ Instagram nke mkpachị nke videogames. Na ndị ọzọ okwu, ị nwere ike bulite na obere vidiyo na ị na ndekọ nke gị egwuregwu na gam akporo, ma ọ bụ ọbụna na-na desktọọpụ ngwa nke mere na mgbe ị na-egwu ya «na-ewe» kasị mkpa Mpaghara na ị na-ekpebi bulite ha.
Netwọk mmekọrịta ọhụrụ nwere natara ezigbo inflow nke isi obodo ya na $ 14 nde nke Serena duziri. O yikwara ka ihe na-adị mma, ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ nyiwe raara onwe ha nye egwuregwu dịka Twitch ma ọ bụ Discord (nke ọ bụla n'ime ụdị ya), anyị nwere ike na-efu ihe yiri nke Powder na-atụ aro.
1 Kekọrịta mkpachị kachasị amasị gị
2 Weghara oge kachasị mkpa nke egwuregwu
3 Na adịghị ike ya
Kekọrịta mkpachị kachasị amasị gị
Wouldnye gaara agwa anyị afọ ole na ole gara aga na naanị ịkwanye obere vidiyo nke egwuregwu anyị na-egwu nwere ike inwe mmetụta dị otú ahụ. Ọ bụrụ na nyiwe dịka Twitch ma ọ bụ YouTube emeworị ya iji soro ọtụtụ narị nde ndị na-eso ụzọ ya, ọ ka nwere ụzọ dị mma iji gaa echiche ọhụrụ na nyiwe; ikwu na TikTok afọ ole na ole gara aga abụrụ m onye ọbịa na ọ bụzi etiti esemokwu mba na mba.
Ntụ ntụ bụ ngwa ọhụrụ dị na Android, iOS na desktọọpụ nke mere na site na profaịlụ anyị anyị nwere ike bulite ọdịnaya n'ụdị obere mkpirisi; Ka anyị kwuo na ọ nwekwara ike ịbụ TikTok nke vidiyo vidiyo dị mkpirikpi.
Ma obu anyi puru iji ya dị ka ngwa iji kirie vidiyo ndị ọzọ na, n'ezie, soro ndị na-ewepụta ọdịnaya site na mobiles ha ma ọ bụ PC ha. N'ezie, ngwa gam akporo agbakwunyere n'ọtụtụ ọrụ, na-eche ụfọdụ atụmatụ ịbịa ka anyị wee nwee ọ enjoyụ otu ahụmịhe ahụ na desktọọpụ site na PC.
Weghara oge kachasị mkpa nke egwuregwu
Geforce ugbu a nwere atụmatụ a ka ị nwee ike inye OK iji oge kachasị mkpa yana "lee" ohere. Nke ahụ bụ ebe ọ bụ na ị na-enuba egwuregwu, ọ dịịrị gị mfe "nyochaa" ndị nke ịdekọ nke mere na emesia ị nwere ha n'ọbá akwụkwọ gị ka ị nwee ike ịkekọrịta ha; ị nwere ike n'ezie a lee anya na otú ezi ihe egwuregwu na Geforce UGBU a na Chrome.
Powder na-arụ ọrụ na desktọọpụ ụdị ahụỌ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ nkwanye, ọ nwere ike ịdekọ oge ndị ahụ ka emesia ị nwere ike idezi obere vidiyo ma kpebie ndị ị ga-ekekọrịta.
Vidio ndị ahụ ị nwere ike dezie ha na ihe mmado, nzacha na obula egwu nke mere na ha na-awụ akpata oyi n'ahụ karị ma mee ka ị masị m. N'ezie, ọ bụ netwọkụ mmekọrịta na-achọ ịnata ụmụazụ ọhụrụ, yabụ na profaịlụ gị ị nwere nhọrọ nke ịgbaso dịka ị na-eso.
Na adịghị ike ya
Ugbu a ngwa gam akporo di oke ọ na-esiri ike ịchọta edemede ma ọ bụ ụdị ọdịnaya ndị ọzọ na-abụghị usoro iheomume ha na-enye gị. Anyị nwere ogwe dị ala nwere bọtịnụ atọ, otu iji nweta usoro iheomume, ọzọ na profaịlụ anyị na nke ọzọ iji gbakwunye ọdịnaya.
Enwere ike ibudata ya na mpaghara site na ekwentị anyị ekenye mkpado na egwuregwu ebugoro na nhọrọ iji jikọọ akaụntụ Xbox iji tinye obere vidiyo na ya.
una nhazi nke ọma na ahụmịhe nke ọma nke ahụ ka na-enweghị ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke mere na ọ ga-amalite ịdị mkpa ma buru n'uche.
Powder - AI onye nchịkọta akụkọ egwuregwu
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Gust Vision Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Bulite ma kesaa obere vidiyo nke egwuregwu kachasị amasị gị na ntụ ntụ, netwọkụ mmekọrịta ọhụụ
Cgbọ ala Project Go dị ugbu a na beta: egwuregwu ịgba ọsọ nke GAMEVIL
Etu ibudata vidiyo YouTube na listi ọkpụkpọ